SomaliaReport: Lahaystayaashii Iiraanida Ahaa Dalkoodii Aadaya
Toban kaluumaysato ka soo jeedday dalka Iran ahayd oo dhawaan laga soo furtay gacanta B/badeedda ayaa kamiistii dalkooda dib ugu noqday ka dib markay sii mareen caasimadda dalka Kenya, magaalada Nairobi.
Wakiil ka tirsan ismaamulka Galmudug kana mid ahaa dadkii soo furtay maxaabiistaa ayaa si rasmi ah ugu gudbiyey saraakiil ka socota safaaradda Iran.
Maxamed Xuseen Khos Amadi oo ka mid ahaa saraakiisha safaaradda Iran ka socta ayaa xaflad arintan lagu maamuusayey u mahadceliyey is maamulka Galmudug dadaalka ay ka gaysteen sii daynta maxaabiistan.
“Waxaan uga mahad celinaynaa madaxweynaha Galmudug soo furashada dadkan iiraanida ah. Maanta halkan ana joogno waxaa sababay geesinimada maamulka ka hortagay falalka B/badeedda.” Ayuu yidhi.
Tobankan Irani ee kaluumaysatada ah iyo afar Pakistaani ahba waxaa khafaashay b/badeedda Soomaaliyeed, waxayna keeneen Xaradheer, ka dibna waxay la wareegeen doontoodii oo ay u isticmaalayeen meel ay weeraro kale ka sameeyaan.
Budhcad badeeddan ayaa waxaa markii danbe weeraray ciidamada badda ee NATO waxayna ka gubeen laashkoodii iyagana waxay ku qasbeen inay ka cararaan meesha una baxsadaan dhanka magaalada Hobyo.
Wakiilka Galmudug u fadhiya Kenya Xassan Maxamed Xuseen (Djabuuti)ayaa sheegay intaa dabadeed inay iyaguna weerareen B/badeedda una baacsadeen dhanka bari, ka dibna ay soo badbaadsheen la hayste-yaashii halkaana lagu qabqabtay b/badeed.
“Waxaan boogaadinaynaa saraakiisha amaanka ee b/badeedda kula dagaalamay dhulka isla markaana ka adkaaday sona qabqabtay”. Sarkaalka oo adalokiisa sii wata ayaa intaa raaciyey inay jireen afar Pakistaani ah oo lagu wareejiyey safaaraddooda.
Cabdi qayuum Bacuuji oo 65 jir ah ayaa yidhi “waxaan ka walaacsanayn inaanan waligeen nala sii dayn doonin”.
“Markay b/badeeddu qabsatay laashkii aan wadanay, waxay yidhaahdeen idinma sii dayn doono ilaa aan dad kale badda ka soo qafaalano. Waxayna bilaabeen inay laashkeena kaxaystaan una isticmaalaan gaadiid ay wax ku soo afduubtaan.”
Bacuuji ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin dadka reer Galmudug ee afartii sitimaan een joognay na siiyey raashinka, guryaha aan deggenayn iyo dharka aan xidhnayn.”
“Waxba ma aanan haysan, muddadii hawlgalkii na lagu badbaadinayey ayuu laashkeenii gubtay. Waxay ahaayeen dadkii aan dhulka kula kulanay kuwii na so dhaweeyey.” Ayuu yidhi Bacuuji.